Inona no miasa amin'ny dokam-barotra amin'ny Rich Rich Media? | Martech Zone
Inona no miasa amin'ny dokam-barotra amin'ny finday manan-karena?
Zoma, Septambra 28, 2012 Zoma, Septambra 28, 2012 Adam Small
Ny fitomboan'ny finday dia tsy mijanona ary tsy azo iadian-kevitra. Na izany aza, ao anatin'ny faritry paikady marketing amin'ny finday, ny onjan'ireo finday avo lenta finday avo lenta dia mitondra valiny mahasoa rehefa miresaka dokambarotra manankarena.
izany infographic avy any Celtra hita taratra ny angona fifamofoana avy amin'ny fampielezana finday sy tablety efa ho 60 manerana ny indostria 4: fialamboly, fivarotana, vola ary fiara. Ny metrika manan-danja dia misy: ny tahan'ny fifampiraharahana, ny tahan'ny fanitarana sy ny tsindry Click-through, ny fijerena lalina ny fampisehoana endri-doka ho an'ny fampielezana haino aman-jery manankarena finday.
Hevitra misongadina amin'ny santionany:
Anisan'ireo endrika doka, mihoatra ny 2/3 (67 isan-jato) no sora-baventy azo havaozina, mahatonga azy io ho endrika doka malaza indrindra. Ny 1/3 sisa amin'ny doka dia nizara roa (interstitial (21 isan-jato)) ary sora-baventy mihetsika (12 isan-jato)
Mahaliana fa nisy iOS bebe kokoa (55 isan-jato) ny doka noho ny Android (45 isan-jato) fa ny fananganana Android dia mitombo hatrany ary manantena i Celtra fa hiova ireo isa ireo amin'ny volana ho avy.
Ny tahan'ny fifamofoana ho an'ny doka amin'ny haino aman-jery manankarena finday salanisa amin'ny tarehimarika indroa (12.8 isan-jato) miaraka amin'ny traikefa amin'ny horonan-tsary sy lalao no mahasarika indrindra.
Traikefa amin'ny lalao dia mandaitra tokoa amin'ny fialamboly miaraka amin'ny (16.6 isan-jato) amin'ireo mpampiasa mamaly singa iray amin'ny lalao.
Ireo mpampiasa dia mirotsaka amin'ny media sosialy amin'ny alàlan'ny doka finday sy fizarana atiny misy marika. (8.7 isan-jato) mizara amin'ny Facebook ary (12.6 isan-jato) Tweet. Ankoatr'izay, ny marika dia mampifangaro bebe kokoa ny serivisy media sosialy vaovao toy ny Instagram, efamira ary Pinterest.
Fomba fiasa mivantana dia hita ao amin'ny ankamaroan'ny doka. Kitiho amin'ny serivisy ivelany, toy ny app store, na tranokala saika tafiditra ao anaty doka foana.
Soso-kevitra azo antoka 7 momba ny fifaninanana famoahana bilaogy vahiny